Numeri 7 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
7 Mhla wagqiba uMoses ukumisela umnquba+ wawuthambisa waza wawungcwalisa+ nempahla yawo yonke nesibingelelo neempahla zaso zonke. Ngoko wazithambisa waza wazingcwalisa.+
2 Zandula ke izikhulu zakwaSirayeli,+ iintloko zezindlu zooyise, ezazizizikhulu zezizwe nezazisongamela abo babhaliswayo, zenza umnikelo,+
3 zawuzisa umnikelo wazo phambi koYehova, iinqwelo ezinophahla zantandathu neenkomo ezilishumi elinesibini, yayinqwelo kwizikhulu ezibini, yayinkunzi yenkomo kuso ngasinye; zazisondeza phambi komnquba.
4 Wathi uYehova kuMoses mayela noku:
5 “Kwamkele oku kuzo, kusetyenziselwe ukuphumeza inkonzo yasententeni yokuhlangana, uze ukunike abaLevi, elowo ngokwenkonzo yakhe.”
6 Wazamkela ke uMoses iinqwelo neenkomo waza wazinika abaLevi.
7 Oonyana bakaGershon wabanika iinqwelo ezimbini neenkomo ezine ngokwenkonzo yabo,+
8 waza oonyana bakaMerari wabanika iinqwelo ezine neenkomo ezisibhozo ngokwenkonzo yabo,+ esandleni sikaItamare unyana ka-Aron umbingeleli.+
9 Kodwa bona oonyana bakaKohati akabanikanga nto, ngokuba babekhonza kwindawo engcwele.+ Kwaye bona babethwala ngegxalaba.+
10 Ngoko ke izikhulu zenza umnikelo wazo wokusungulwa+ kwesibingelelo ngomhla wokuthanjiswa kwaso, zaza zawusondeza izikhulu umnikelo wazo phambi kwesibingelelo.
11 Ngako oko wathi uYehova kuMoses: “Masibe sinye isikhulu ngosuku esisondeza umnikelo waso wokusungulwa kwesibingelelo, ize ibe sesinye isikhulu ngolunye usuku.”+
12 Ngoko ke owawusondezayo umnikelo wakhe ngosuku lokuqala yaba nguNashon+ unyana ka-Aminadabhi wesizwe sakwaYuda.
13 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele,+ zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo ogalelwe ioli;+
14 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;+
15 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
16 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
17 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaNashon unyana ka-Aminadabhi.+
18 Ngosuku lwesibini uNetaneli+ unyana kaTsuware, isikhulu sakwaIsakare, wenza umnikelo.
19 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
20 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
21 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
22 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
23 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaNetaneli unyana kaTsuware.
24 Ngosuku lwesithathu yaba sisikhulu soonyana bakaZebhulon, uEliyabhi+ unyana kaHelon.
25 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo ogalelwe ioli;
26 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
27 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
28 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
29 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaEliyabhi unyana kaHelon.+
30 Ngosuku lwesine yaba sisikhulu soonyana bakaRubhen, uElitsure+ unyana kaShedeyure.
31 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
32 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
33 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
34 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
35 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaElitsure unyana kaShedeyure.+
36 Ngosuku lwesihlanu yaba sisikhulu soonyana bakaSimeyon, uShelumiyeli+ unyana kaTsurishadayi.
37 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
38 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
39 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
40 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
41 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaShelumiyeli unyana kaTsurishadayi.+
42 Ngosuku lwesithandathu yaba sisikhulu soonyana bakaGadi, uEliyasafu+ unyana kaDehuweli.
43 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
44 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;+
45 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
46 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
47 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaEliyasafu unyana kaDehuweli.+
48 Ngosuku lwesixhenxe yaba sisikhulu soonyana bakaEfrayim, uElishama+ unyana ka-Amihudi.
49 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
50 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
51 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
52 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
53 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaElishama unyana ka-Amihudi.+
54 Ngosuku lwesibhozo yaba sisikhulu soonyana bakaManase, uGamaliyeli+ unyana kaPedatsure.
55 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
56 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;+
57 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
58 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
59 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaGamaliyeli unyana kaPedatsure.+
60 Ngosuku lwesithoba yaba sisikhulu+ soonyana bakaBhenjamin, uAbhidan+ unyana kaGidiyoni.
61 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
62 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
63 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
64 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
65 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo ka-Abhidan unyana kaGidiyoni.+
66 Ngosuku lweshumi yaba sisikhulu soonyana bakaDan, uAhiyezere+ unyana ka-Amishadayi.
67 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
68 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;
69 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
70 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
71 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo ka-Ahiyezere unyana ka-Amishadayi.+
72 Ngosuku lweshumi elinanye yaba sisikhulu soonyana baka-Ashere, uPagiyeli+ unyana kaOkeran.
73 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
74 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;+
75 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
76 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
77 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo kaPagiyeli unyana kaOkeran.+
78 Ngosuku lweshumi elinesibini yaba sisikhulu soonyana bakaNafetali, uAhira+ unyana kaEnan.
79 Umnikelo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, esibunzima baso bulikhulu elinamashumi mathathu eeshekele, sasinye isitya sesilivere esiziishekele ezingamashumi asixhenxe ngokweshekele yendawo engcwele, zozibini zizele ngumgubo ocolekileyo womnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli;
80 yanye indebe yegolide eziishekele ezilishumi, izele sisiqhumiso;+
81 lalinye ithole lenkomo eliyinkunzi, yanye inkunzi yegusha, yanye inkunzi yemvana ekunyaka wayo wokuqala, zaba zezomnikelo otshiswayo;+
82 lalinye itakane lebhokhwe lomnikelo wesono;+
83 ezombingelelo wobudlelane+ zaba mbini iinkomo, zantlanu iinkunzi zeegusha, zantlanu iinkunzi zeebhokhwe, zantlanu iinkunzi zeemvana nganye kuzo inonyaka ubudala. Nguwo lowo umnikelo ka-Ahira unyana kaEnan.+
84 Nguwo lowo umbingelelo wokusungulwa+ kwesibingelelo ngomhla wokuthanjiswa kwaso, zizikhulu+ zakwaSirayeli: zaba lishumi elinesibini izitya ezikhulu zesilivere, zalishumi elinesibini nezitya ezincinane zesilivere,+ zalishumi elinesibini neendebe zegolide;
85 salikhulu elinamashumi mathathu eeshekele isitya ngasinye esikhulu sesiliverere, saza sangamashumi asixhenxe isitya ngasinye esincinane, iyonke isilivere yezo zitya yaba ngamawaka amabini anamakhulu mane eeshekele ngokweshekele yendawo engcwele;+
86 zaba lishumi elinesibini iindebe zegolide+ zizele sisiqhumiso, ndebe nganye iziishekele ezilishumi ngokweshekele yendawo engcwele, iyonke igolide yezo ndebe yaba likhulu elinamashumi mabini eeshekele;
87 zizonke iinkomo zomnikelo otshiswayo+ zaba ziinkunzi ezilishumi elinesibini, neenkunzi zeegusha ezilishumi elinesibini, neenkunzi zeemvana ezinonyaka ubudala ezilishumi elinesibini neminikelo yazo yokudla okuziinkozo,+ namatakane eebhokhwe omnikelo wesono+ alishumi elinesibini;
88 yaye xa zizonke iinkomo zombingelelo wobudlelane+ zaba ziinkunzi ezingamashumi amabini anesine, iinkunzi zeegusha zaba ngamashumi amathandathu, iinkunzi zeebhokhwe zaba ngamashumi amathandathu, iinkunzi zeemvana ezinonyaka ubudala zaba ngamashumi amathandathu. Nguwo lowo umbingelelo wokusungulwa+ kwesibingelelo emva kokuthanjiswa kwaso.+
89 Wayesithi ke ngoko nanini na uMoses akungena ententeni yokuhlangana ukuze athethe naye,+ eve ilizwi lithetha kuye livela ngasentla kwesigubungelo+ esasiphezu kwetyeya yesingqino, phakathi kweekherubhi ezimbini;+ yaye wayethetha naye.